Nzira yekuita sei pfungwa dzekushandurwa kwewebhu webhutori?
Hungu, nyaya iyi inowanzoenderana nekutengesa kwemawebsite haisi nyore sezvinoti vazhinji vedu tingafunga. Uyezve, hakugoni kuva nemafungiro mamwechete, kana zvichifanira kunge zvakanaka kana kwete. Chinhu ichocho ndechekuti nzira yekuvandudzwa kwewebsite uye nenyaya yayo yekutengesa haigoni kunyatsotorwa.
Pashure pezvose, ndanga ndiri mumabhizimisi kwemakore anenge gumi, saka ngatiedzei kuwana mhinduro yakakwana, zvisinei, pasina kupa mhinduro imwechete kana mazano ane pfungwa imwechete. Tichifunga nezvekuvandudzwa kwewebhu webhutori zvakanyanya, iwe unofanirwa kubhadhara zvakanyatsocherechedza pane zvinyorwa zvinotevera.
Chokutanga pane zvose, funga nezvekushandurwa kwewebsite uye nemari yako kwete sechigadzirwa, asi zvakawanda sebasa raunenge uchizoita. Ngatitarisei - mawebsite haana chaanoita nemimwe michina chaiyo. Nokudaro kushandiswa kwekushandurwa kwewebsite hakugoni kutaurwa sezvakangoita zvezvinhu. Kucherechedza nyaya yacho kubva pakuona kwebasa, iwe unonzwisisa kuti nei pasina mimwe yemitengo yemitengo kana kunyange nzira imwe chete yekufungidzira mitengo yekusimudzira webhusaiti. Chero nokuti basa iri rinowanzotora nguva yakawandisa nekuedza kukuru, izvo zvinowanzosiyana pamamiriro ose ega ega.
Uyezve, chero zvinyorwa uye kunyange kuongororwa kwakajeka kuve nekuenzanisa kwakaringana kwekutengeswa kwemawebsite kunonyanya kusanyatsoziva, sezvavanogara vachizviisa pasi, zvichida kusvika pamwero. Ndinoreva kuti kushandiswa kwepawebsite kunogona kuitwa nenzira zana dzakasiyana. Ichokwadi, hapana kurira kuno. Kunyanya, iwe unogona kutarisa kamwechete - ingobuda kunze kuti uone makambani akawanda anotungamirira achipa basa.
Ingovabvunza kuti iwe webhupu yako yekutsvaga yekutengesa kuve yakagadzirirwa purojekiti yako. Nenzira iyo, ndinotenda kuti vazhinji vavo vachakuudza zvakafanana - mawebsite anogona kutaurwa sezvibereko nenzira imwe neimwe. Iwe unogonawo kunge uine purogiramu yakakwana ye mazano akasiyana-siyana kwose kwepupu. Ndinoreva kuti iwe unogona kuve nekufungidzira kwakasiyana zvakasiyana, kutanga pane imwe nzvimbo pakati pezviuru zviviri nezana remadhora, nguva imwe neimwe yezvinyorwa zvakafanana. Ingozvitora zvishoma-kana zvasvika pamutengo, hapana chakanaka chekufungidzira kwakarurama, kana chakarurama kana chiyero chimwe chete.
Uyezve, kuvaka webhusaiti yehutano ndiyo nzira inowanzobatanidza zvakanyatsorongeka zvekugadzirira. Ndinoreva kuti zvivako zvebhizimisi rako, kunyange zvinhu zvakanyanya kutarisirwa zvinotarisirwa kuti zvive zvakanyanya paIndaneti, zvinowanzove zvine simba pamusoro pemutengo wekupedzisira iwe unogona kupiwa pakuguma.
Uye kudzokera kune imwezve zvakare, ngatifungei tichava nechiyero chakavimbika pamatambudziko ose. Nenzira iyo, uchishamisika kuti chii chinogona kutarisirwa kubva pamatengo ako ekuvandudzirwa kwewebsite, vazhinji vekambani yese vane chimwe chinhu pamusoro pemakumi mashanu emibvunzo inowanzobvunzwa, kana kungokupai fomu yakazara yekuzadza. Nenzira iyo, zvichienderana nemhinduro dzako, zviyero zvavo zvemabasa zvinogona kusiyana kupi zvako pakati pemawa mashanu uye maawa anopfuura zana pane zvose zvakanyorwa mauri kutarisira kuti webhusaiti yako inoshanda Source . Uye iwe ungada here kubhadhara nguva yakakwana kuti upedze nzira iyi, iyo ichaita kuti kuverenga kwako kuve kurega kusununguka mushure mezvose?